Lahatenin'ny filoha Rajaonarimampianina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Lahatenin'ny filoha Rajaonarimampianina
Nanangona RRJ il y a 7 années
Mety hahaliana anao ny mamaky ny Kabarin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimamapianina. Efa ho 5 andro aty aorian'ny nikabarian'ny Filoha vao hita ao amin'ny pejy facebook an'ny Fiadidian'ny Repoblika.
KABARY FIARAHABANA NOHO NY ASARAMANITRA 2015 ATAON’Andriamatoa FILOHAN’NY REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
9 janvier, à « CEREMONY BUILDING » LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA
Ry Vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana, honorable invités; Mesdames et Messieurs;
Tsara fihofahofa hono ny ravinalan’ny ala Atsinanana!
Midoroboka alokaloka ny ravin-tapian’i Mamo ; fa mikopakopa-karavoana, kosa, ny ala maitso màvan’ Iavoloha !
Tsotra ny antony ! Satria tonga havana ka mitso-drivo-karavoana, vangian-tsakaiza,ka mihofahofam-pifaliana.
Tsy hafan’izany ny fonay ankehitriny ; tompokolahy sy tompokovavy, mahita anareo vory maro am-pifaliana,etoana , noho izao Asaramanitra izao.
Moa va tsy toy ny fodilahy mamangy railovy e ! ny mpamangy misiotsioka, ary ny vangiana velon-kira... !
Tonga ity ny fotoana hifampiharaban-tsika tratry ny Asaramanitra. Ianareo vahoaka malagasy tsy vaky volo no hitodiako manokana amin’izany vaninandro lehibe izany.
Soa toavina malagasy ny firariantsoa sy fangatahana ny fitahian’Andriamanitra noho ny nahatratrarantsika ny taona vaovao 2015 sy ny isaorana Azy noho ny nahatafitana salama sy tomady ny taona teo aloha, koa iampitàna @ taona vaovao.
Am-pifaliana no hitsidihanay ny isan-tokantrano hiarabahanay sy hirarianay ny soa sy ny tsara indrindra ho anareo tsirairay avy, manerana an’i Madagasikara.
Koa dia salanitra tompokavavy, miarahaba tompokolahy, tratr’izao andro anio izao hiarahantsika manamarika ny taona vaovao. Ny andon’ny lanitra sy ny tsiron’ny tany anie hombantsika lalandava.
Fisaorana lehibe no atolotray mivady amin’ny fanomezam-boninahitra omenareo tonga marobe manatrika amin’izao fotoana androany izao. Ianareo izay misolon-tena ny malagasy manerana ny lafo valon’ny Nosy. Mankasitraka sy mankatelina tompoko.
Azo lazaina fa tafapetraka izao ny rafitra rehetra ahafahantsika miroso amin’ny asa lehibe ho fampandrosoana ny Firenena.
Ny taona 2015 dia ho taona zina ho an’ny asa ho fampandrosoana ny firenena.
Ny fampihavanam-pirenena nofidinintsika dia manampy antsika amin’ny lafiny maro eo amin’izany fiainam-pirenena izany.
Tsy eken’ny vahoaka malagasy intsony ny fanakorotanana sy ny fampizarazarana ny Malagasy ary ny fitondrana dia efa mandray ny andraikiny amin’ny fepetra rehetra mba hiarovana ny filaminana sy fandriampahalemana eto amin’ny tany sy ny firenena.
Tonga ny fotoana hanamafisana ny fiarahan’ny malagasy miroso amin’ny fametrahana ny ho avy tsara kokoa ho an’ny rehetra.
Marihiko manokana eto ;
- ny firosoana tsy ampihambahambana amin’ny famerenana ny fandriam-pahalamena maharitra, ny ady amin’ny kolikoly,
- ny fanamafisana ny tany tan-dàlana
- ny fametrahana ny fototry ny asa ho an’ny maro an’isa toy ny fisokafan’ny AGOA, izay hitondra asa analiny maro aman’hetsiny mihitsy aza
- eo ihany koa ny fiveranan’ny fitokisan’ireo mpamatsy vola
- ny fiantombohan’ny asa vaventy voalazan’Andriamatoa Praiminisitra teo, mikasika ny angovo azo avaozina (projets structurants en matière d’énergie renouvelable, barrages,…), eo ihany koa ny làlana lehibe (autoroutes) sy ny foto-drafitr’asa maro samihafa.
NY FIAHIANA MPIARA-BELONA
Dimanpolo taona mahery izao no niantsorohantsika ilay Fahaleovantena izay nimatimatesan’ireo efa lasak’ho razana. Dimanpolo taona mahery isika no nihira ny fitiavan-tanindrazana, nitalaho tamin’Andriamanitra mba hiadana sy ho finaritra, ho sambatra tokoa. Hiram-pirenena vao norenesintsika sy noventesintsika teo izany…
Ry Malagasy mpiray tanindrazana, mametraka fanontaniana: isika aiza ho aiza isika izao ? Dimampolo taona aty aoriana: Miadana ve ? Finaritra ve ? Sambatra ve ?
Ankehitriny dia am-panetrentena no ilazana fa isaky ny manisa malagasy folo isika dia ny fito amin’izay no miaina anaty fahasahiranana avokoa. Tsy mizaka akory ny fara-fahakeliny amin’ny zon’ny olompirenena na fonenana izany, na fiahiam-pahasalamana, fianarana ho an’ny ankizy. Ao anatin’ny fahantrana tanteraka hoy ny fiteny mahazatra kanefa fantatro fa maro ny malagasy no tsy tia an’izany lazaina hoe mahantra izany. Rariny ny azy.
Raha maro toa izany no miaina anaty fahasahiranana tanteraka, toa nofinofy fotsiny ny hoe hanangana Firenena matanjaka, manankarena sy mampirehareha ny malagasy.
Inona no anton’izany fahasahiranana lehibe mianjady amin’ny vahoaka malagasy izany ? Be loatra ny mizana izay tsindrian’ila nivangogo teo amin’ny firafitry ny fiaraha-monina nandritra ny taona maro. Mizana tsindrian’ila izay miteraka elanelana tsy ara-drariny eo amin’ny samy malagasy,ary eo amin’ny faritra maro samihafa.
Noho izany : tsy maintsy atevenina ny tetikasa fiahiana ny mpiara-belona ka avy any amin’ireo faran’izay sahirana no hanatevenana izany.
• Amin’ny volana Septambra dia hihitatra amin’ny faritra maro ilay politikan’ny « Vatsin’Ankohonana » izay efa ampiharina amin’ny Distrikan’i Betafo ankehitriny. Inona no kendrena amin’izany ? Mba ho afaka hiahy ny fahasalaman’ny zanany ny reny; afaka hampianatra ny zanany amin’ny fanabeazana fototra ny reny malagasy izay anatin’ny fahasahiranana Tompokolahy sy Tompokovavy.
• Ankehitriny, dia efa ao anatin’ny ny fanitarana ny « Asa Avotra » isika. izany nanatanterahana ny fampidirana ny mpampianatra FRAM miisa 10 000 tamin’ity taona ity, mba tsy ho vesatra ho an’ny ray aman-dreny intsony ny fampianaran-janaka. Hotohizantsika ho ezahantsika izany, ary efa lazaina koa fa amin’ity taona 2015 ity dia misy 10 000 vaovao koa FRAM ho ampidirina ho mpampianatra raikitra mpiasam-panjakana.
• Atsahatra ny fanampim-bola (subventions) izay atao eo amin’ny solika. Ary ny vola izay ho azo amin’izany dia ho entintsika hanatevenana ny fandaharan’asa ara-tsosialy.
Ny fiahiana mpiara-belona, tsy hoe fanampiana tsy misy farany akory fa dingana voalohany izany, dingana voalohany izany ahatonga azy ireo ho afa-pahasahiranana ary mba ahazoany miroso ny eo amin’ny ara-toekarena.
Ho jerena manokana ny fanarahana ny fianaran’ny ankizy. Tafaverina soa aman-tsara any am-pianarana tamin’ity taona ity sy tamin’ny taona teo ny ankizy latsaky ny 15 taona izay miisa any amin’ny 500.000 izay tsy tafiditra tao an-tsekoly. Tsy maintsy mianatra ny zana-bahoaka rehetra, izany no tanjona maharitra. Izany no efa fanamby nataonay, tanterahanay izany Tompokolahy sy Tompokovavy.
Ho tohizana ny fampihofanana sy ny fampidirana ny mpampianatra ho mpiasam-panjakana araka izay efa nolazaiko teo.
Ho tohizana ihany koa ny fanamboarana sy fanorenena efitra fianarana manerana an’i Madagasikara.
Ho jerena manokana ihany koa ny fanarahana ny fitsaboana ho an’ny sarambambe-bahoaka.
Mitohy ny famerenana amin’ny tokony ho izy ireo « centre de santé de base » eny ambanivohitra, ary koa ny hopitaly eny an-tanan-dehibe.
TAONAN’NY FAHADIOVANA SY FANADIOVANA
ITY TAONA ITY DIA ATAONTSIKA TAONAN ’NY FAHADIOVANA SY NY FANADIOVANA. Hisy ny ezaka maro sy ny tetika maty paika hanàlana amin’ny fomba maharitra ny fako eny an-tanan-dehibe, indrindrindrindra ny eny an-drenivohitry ny faritra.
Ao anatin’izany taonan’ny fahadiovana izany no ametrahana ilay politika manokana momba ny fanadiovana (assainissement) ny rano eny amin’ireo tanan-dehibe efa nolazaiko, ho an’ Antsiranana, Antananarivo sy Toliary. Ary ho itarina amin’ireo faritra hafa manerana an’I Madagasikara izany.
Izay koa no fiandohan’ny fiharian-karena iombonana ary misy fanitsiam-pitondrana tsy maintsy hatao mba hampanjary izany, dia ny fitsinjaram-pahefana mahefa.
Ampanakaikezina ny malagasy amin’ny lafi-valon’ny nosy ny fahefahana manatanteraka, hanamorana ny famaliana ny hetahetan’ny vondron’olom-pirenena izay any ifotony. Miorimpaka ny fanarenana sy ny fampiroboroboana ny fiharian-karena. Tsy maintsy miantraika any amin’ny tokatranon’ny tsirairay ny fihatsaram-piainana.
Hatramin’izay ka hatramin’izao: ampahiny lehibe dia lehibe @ teti-bola dia ny fitondrana foibe no mitantana azy…
Tsy maintsy ovaintsika izany, ovaintsika miandalana izany. Tsy ho vita indray andro izany zavatra izany satria mila mitandrina isika. Mila mametraka rafitra isika, fa azo ampitomboina izany amin’ny fotoana izay mampety azy.
Ny fitsinjaram-pahefana ampiharina amin’ity Tanindrazana iombonantsika ity ry malagasy mpiray tanindrazana amiko dia fitsinjaram-pahafena hahazoan’ny vondron’olona ifotony manabe voa ny faritra onenany sy ivelomany.Tsy ho ela, izay no fanirianay, ary inoako fa faniriantsika rehetra.
Tsy ho ela dia ho avalon’ny tantarantsika izany hoe « zanak’ikala hafa, tany lavitra andriana sy kely tsy mba mamindro » izany.Tsy hamelantsika raha tsy vita izany.
Miaro izany fandriam-pahalemenana manerana an’i Madagasikara izany isika, na ny ety an-drenivohitra, na ny eny ambanivolo. Betsaka no efa natao tamin’izany nefa maro ny asa mbola miandry, maro ny asa mbola hatrehana. Anisan’izany ny fiarovana ny ranomasina sy moron-tsirak’i Madagasikara.
Tsy maintsy harovantsika ny harena anaty ranomasina izay aripakin’ny jiolahy an-dranomasina (pirates des mers) amin’izao fotoana izao. Volà be tsy toko tsy forohana no very amin’ny kitapom-bolam-panjakana noho izany.
Etsy andaniny, tsy azo avelà ho lasa fandalovan’ny mpampirohoro isankarazany (terroristes) ny aty Madagasikara, tsy maintsy mailo isika satria Madagasikara dia lalana fandalovan’ny sambo maro avy any ivelany any.
Misy asan-jiolahy fampihorohana, rentsika izany ary efa voalazan’ireo nikabary talohako. feno habibiana nianjady tany Frantsa tamin’ireo olona 12 mpanao gazety tao @ Charlie Hebdo sy ny polisy tao Parisy ny faha 7 janoary teo dia mampahatsihahy antsika izany fa manerana an’izao tontolo izao ny loza mitatao ka tsy maintsy mailo isika. Miondrika am-panajana amin’ireo tra-pahoriana amin’izany isika ary miara-miombona ihany koa amin’ny vahoaka Frantsay sy ireo liam-pivoarana rehetra manerana izao tontolo izao.
Izany no milaza amintsika fa ilaina, ilaina ny fihavanam-pirenena. Ny fihavanam-pirenena izay tahaka ny efa nambarako dia manana ny toerana izay maha izy azy eo amin’ny fiainam-pirenena.
• Ny fahombiazan’izany fampihavanam-pirenena izany dia fandresen’ny vahoaka malagasy manontolo
• Ny rehetra, olon-tsotra, miaramila, ray aman-dreny am-panahy, dia manana ny toerany avokoa eo amin’ny fampihavanam-pirenena. Fa anjarako kosa, amin’ny maha filohan’ny Repoblika sy ray aman-drenin’ny Malagasy ny tenako tsy ankanavaka, dia am-panetren-tena no nanekeko hitarika sy mandrindra an’izany.
Tsy ekentsika intsony ny asa fanakorontanana, ny toetra mampizarazara sy mampiady ny samy malagasy. Mitaky fandriam-pahalemana ny vahoaka, tsy milà kirizy intsony ny vahoaka.
Tonga ny fotoana ny firaisan-kina masina (Union Sacrée) ho an’ny malagasy rehetra izay hanoratantsika tantara vaovao sy ampitso mihiratra kokoa ho an’ny taranaka.
NY FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA SY NY FAMPANDROSOANA NY ENY AMBANIVOHITRA
Dia voalazan’izay mpitondra teny teo fa izao endrika hitantsika izao dia hampisehoana fa miady sy miaro ny tontolo iainana isika. Ireo no taratry ny tontolo iainana: ny baobab, ny ranomasina izay misy ny zavatra ao anatiny rehetra.
Ny ety ambonin’ny tany izay tokony harovana, izany no tiana haseho amin’ny androany, satria ho an’ny vahoaka Malagasy no hanaovana an’izany zavatra izany. Voakasik’izany ny ala, ny morontsiraka, ny ranomasina.
Izany no atao satria fantatra fa fivelomana sy fihariana ny fikajiana ny tontolo voajanahary.
Izany no maha zava-dehibe ny fisian’ny politika mampiombona ny valan-java-boahary sy ny fihatsaram-piainan’ny olona. Na an-tanety io na an-dranomasina io.
Loharanon-karena ny tontolon-javaboahary fa tsy harena adala-tompo sanatria, ka isika indray no hangak’atiny rahampitso.
Fototra iorenan’ny fihatsaram-piainan’ny malagasy maro an’isa sy ny fiharian-karem-pirenena ny tontolo ambanivohitra, sompitry ny zavaboahary ity nosintsika ity. Andao, andao arovantsika.
Arovantsika amin’ny dorotanety, amin’ny tavy izay mandrava ny tontolo iainantsika.
Hamafisintsika izany ady izany ary ampiharina amin’ny fomba enjana araka izay azo atao ny lalana.
NY LAFINY ARA TOE-KARENA
Ny toko telo mahamasa-nahandron’ny Firenena dia ny Fitondrana, ny olom-pirenena tsy ankanavaka ary ny mpandraharaha izay manana ny andraikiny amin’ny fanarenana.
Ny Soa iombonana dia ho teraky ny Ezaka iombonana fa tsy ankinina amin’ny Filoham-pirenena irery, tsy ankinina amin’ny Fitondram-panjakana irery.
Ny sehatra tsy miankina DIA fototry ny fampandrosoana ara-toekarena. Efa noteneniko ombieny ombieny izany.
Ny fanapaha-kevitra voalohany mikasika ny fandraharahana dia ny tsy isian’ny fitomboan’ny tahan-ketra amin’ity taona 2015 ity, satria fantatra fa mbola mibaby kitra tamin’ny krizy ny ankamaron’ny orinasa amin’izao fotoana izao, indrindra fa ny orinasa madinika sy salasalany.
Mitaona antsika malagasy hiditra amin’ny fandraharahana anaty fitsipika. Fitsipi-dalao mazava, mandrisika ary tsy misy tombo sy hala no apetraka amintsika.
Rehefa mazava ny fitsipi-dalao, dia mari-pototra ny fitantanana. Ary izany indrindra no isaoranay, isaoranay an’Andriamanitra indrindra indrindra amin’ny fiverenantsika amin’ny AGOA satria mitondra asa an’aliny sy hanetsiny maro izany. Ary efa nanomboka tamin’ny volana desambra teo izany ary mitohy isam-bolana amin’ity taona ity izany. …
Tsy maintsy mamerina ny fifampitokisana eo amin’ny Fitondram-panjakana ny ratsamangaika eo amin’ny vahoaka isika. Hanabe voa ny ho entimanana ny Fitondrana mba hiatrehina amin’ny adidy izay tsy azony ihodivirana toy ny fanabeazana ny olom-pirenena, fahasalamana, ny fandrafetana sy fananganana ireo foto-drafitr’asa maro samy hafa.
Tsy mora anefa izany, tsy maintsy atrehintsika izany, ary mila fiovana toe-tsaina izany zavatra izany.Isika samy olom-pirenena dia manana anjara ezaka lehibe hamerenana indray izany soa toavin’ny fiarahamonina izany “Miara-monina, miara-belona, mifamela”. Aoka tsy hifanome tsiny fotsiny, fa raha misy mahatsiaro tena sahirana noho izany dia miara-manarina. Miara-manarina ihany no fanafodiny.
Efa noresahina teo moa ny fitsinjaram-pahefana. Ho apetraka izany amin’ny faritra maro samihafa ary heverina fa anatin’ny politikam-panjakana rehetra dia fototra, mifototra amin’izany fitsinjaram-pahefana izany.
Efa voaresaka ireo fotodrafitr’asa maharitra, malahelo isika mbola mahita ihany eo amin’ny lafin’ny JIRAMA; eo amin’ny lafin’ny herin’aratra, fa mbola misy ny zavatra miseho mampalahelo: tsy mahazo herin-jiro araka izay ilaina sy arak-izay ividianany azy ny toerana sasany. Mila resahana am-pahatoniana sy amin’ny fomba entitra ny zava-misy.
Nandova isika fa tsy milaza hoe mandova dia mijanona eo. Miasa isika, mitady vahaolona ny amin’izany. Natsangana ny komity manokana ivelan’ny JIRAMA. Efa ela no fantatra fa tsy mitombina ary tsy mahomby intsony ny politikan’ny herin’aratra nisy teto Madagasikara.
Betsaka ny efa natomboka, mbola tohizantsika voalazan’Andriamatoa Praiminisitra teo any amin’ny faritra maro samiafa. Ho tohizantsika izany tetik’asa izany.
Fotoana tahaka izao moa dia misy ihany ny fanamarihoina izay mampiavaka azy. Rehefa azo atao izany.Ireto ny vitsivitsy izay ambarako alohan’ny hamaranako ny teny:
Mbola iarahantsika mahita ny fahasahiranana eto amin’ny firenena, be ny fotodrafitr’asa mbola ilantsika vola eto amin’ny firenena. Hanomezana asa ary ho amin’ny tombotsoam-bahoaka. Na izany aza, dia te hampiseho ny fitondram-panjakana fa azo atao ny manao ezaka maro samy hafa ao anatin’ny fanetren-tena, ao anatin’ny fahalalana ihany koa ny tombotsoan’ny firenena, ka dia eo anatrehin’izany ny Fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra fa hanondrotra 7% ny karaman’ny Mpiasam-panjakana. Mihoatra ny tahan’ny fisondrotan’ny vidim-piainana izany. Ezaka lehibe izany raha ny eo amin’ny fampitahana ny fahateren’ny teti-bola no heverina.
Eo ankilan’izany kosa anefa dia vonona ny fitondram-panjakana hiroso amin’ny fanavaozana maro samy hafa hanatsarana ny tontolon’ny asam-panjakana sy ny mpiasam-panjakana.Tafiditra amin’izany ny fanamboarana trano fonenana ho an’ny mpiasam-panjakana.
Misy ihany koa ny fanalefahantsay faobe noho ny fahatongavan’ny taona vaovao 2015 izao. Izay angatahantsika ho vakian’Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny Presidence amintsika rehefa avy eon y votoatin’ny lalana izay nanapaka izany.
Ry vahoaka Malagasy Mpiray tanindrazana, tsy taonan’ny tahotra sy ny ahiahy ny taona 2015 fa taona iaingan’i Madagasikara ho amin’ny fampandrosoana. Mirary ho antsika rehetra, mirary ho antsika rehetra ny tenananay mba ho taonan’ny fahatoniana sy ny fahatokisan-tena. Ho taonan’ny fanambinana amin’izay hisasarana. Ho taona zina tokoa noho ny herim-po sy ny asa anaty faharisihana ity taona vaovao ity.
Mamy dia mamy ireo teny natosaky ny fonareo ho anay mivady sy ny ankohonanay teo. Vatsy manavao ny aina ho enti-miatrika ity taona santarintsika ity izany.Izahay koa dia mirary toy izany ho anareo rehetra izay manatrika eto. Ary ho anareo izay mihaino sy mijery izao fifampiharabana izao amin’ny fampihelezam-peo, amin’ny haino aman-jery manerana ny nosy. Eny fa na manerana izao tontolo izao amin’ny alalan’ny internet. Ho tafin-janahary hery sy tanjaka isika satria ity taona ity dia mendrika izany. Aoka izay ny fisentosentoana ny fifamendrofendroana.Isika Malagasy no fototra sy anton’ny fahombiazana.Mpirahalahy mianala isika, aoka hiara-hiasa ampahatokiasana.
Eto ampamaranana dia izay teny voalazako teo dia teny notononina am-pahamatorana ka havadika ho bainga ho vavolombelon’ny asa. Ho entina mampandroso ity firenena malalako sy malalanao ity. Koa mirary antsika ho ela velona sy hifanatitra amin-janaka aman-jafy. Ho salama ka hianoka ny mamy hampamitana ny adidy masina neken’ny tsirairay ho anjara birikiny manandrify azy hampandrosoana ny firenena. Hanandratana avo firenena.
Misaotra Tompokolahy, mankasitraka Tompokovavy!!!
Samia ho tahian’Andriamanitra isika rehetra.